Ingxelo yamagama aphambili eGoogle
NguWendy Piersall, uHeather B. Armstrong
Inkqubo ye- Ingxelo yamagama aphambili yenye ye ezona ngxelo zibalulekileyo kuGoogle Analytics. Le ngxelo ikunika ukuqonda kubafundi bakho beblogi kunye nolwazi olubaluleke kakhulu oludingayo xa ulungiselela iblogi yakho ukuba isebenze nabathengisi kunye neempawu.
Ukujonga iingxelo zakho zikaGoogle zohlalutyo, ngena kwiakhawunti yakho kwaye ucofe iqhosha lokuJonga iNgxelo ecaleni kwegama lebhlog yakho kwiphepha lasekhaya leGoogle Analytics Oku kuyakuzisa kwiDashboard yakho, ekunika amanqaku aphambili kolona lwazi lubalulekileyo kwiakhawunti yakho yohlalutyo.
Ingxelo yakho yamagama aphambili ibonisa amagama kunye namabinzana apho iinjini zokukhangela zinxulumene nomxholo wakho kwaye zisetyenziselwa ukufumana indawo yakho.
Ukujonga ingxelo ephezulu yamagama aphambili, yiya kwiDashboard yakho nakwimenyu ekhohlo cofa oovimba beTrafikhi; emva koko ucofe amagama aphambili.
Ingxelo yamagama aphambili kwiGoogle Analytics.
Olu luhlu lulandelayo luchaza imiba ebalulekileyo yamagama aphambili asetyenziswa ngabantu ukufumana indawo yakho:
Kutheni le nto iimveliso zikhathalela ingxelo yakho yamagama aphambili: Ukuba ubeka amagama aphambili ahambelana neemveliso okanye iinkonzo, baya kufuna ukuba igama labo livele kwindawo yakho.
Kutheni le nto kufuneka ukhathalele ingxelo yakho yamagama aphambili: Ufuna ukuqiniseka ukuba amagama aphambili avela kule ngxelo ngalawo ufuna ukudityaniswa nawe kunye nomxholo wakho. Ukuba umbe nzulu kula mabinzana, kuya kufuneka ubenakho ukutyhila imibuzo yokufunda abanokungakubuzi kumagqabaza akho.
uyenza njani iglasi
Iintsholongwane zentlungu yamazinyo
I-smz tmp ds 800 160 isebenzisa
ibuprofen vs acetaminophen yeentlungu